महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीद्वारा पदभार ग्रहण
पहिलो बैठकमै कल्याणकारी कोषमा कम्तीमा ५ करोड जम्मा गर्ने प्रतिबद्धता
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूले पदभार ग्रहण गरेका छन् ।
यही भदौ ४ र ५ गते सम्पन्न महासंघको २५औँ महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा गोविन्द आचार्यको अध्यक्षतामा ४७ सदस्य कार्यसमिति र रोशन पुरीको संयोजकत्वमा दुई सदस्य रहेको लेखा समिति गठन भएको थियो ।
महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले बगैँचामा कपुरको बिरूवा रोपेर र नवनिर्वाचित अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले त्यही बिरूवामा पानी राखेर पद हस्तान्तरण गरेका थिए भने नवनिर्वाचितलाई निवर्तमान अध्यक्ष डा. विष्टले प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए ।
पद हस्तान्तर कार्यक्रममा सभामुख ओनसरी घर्ती, महासंघका पूर्व अध्यक्षहरु, सल्लाहकारहरु लगायतको उपस्थिती थियो । सो अवसरमा सभामुख घर्तीले पत्रकारको पेशागत हक हितका लागि महासंघले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताइन् ।
नवनिर्वाचित अध्यक्ष आचार्यले महासंघ सधैँभरि प्रेस स्वतन्त्रताको पक्ष रहने प्रतिवद्धता जनाए । उनले सबैको सल्लाह, सुझावका आधारमा सबै पक्षलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्ने बताए । सो कार्यक्रममा आचार्यले १ करोड ४६ लाख ५३ हजार रहेको महासंघको कल्याणकारी कोषलाई बढाएर आफ्नो कार्यकालमा कम्तीमा ५ करोड पु¥याउनेसमेत प्रतिबद्धता जनाए ।
पहिलो बैठकमै भयो यस्तो निर्णय
नवनिर्वाचित कार्यसमितिको बैठक शुक्रबारै बसेको छ । सो बैठकले पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षा र पेशागत मर्यादालाई सधंै उच्च राख्ने निर्णय गरेको छ । लोकतन्त्र, मानवअधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक हितका पक्षमा विगतदेखि महासंघले चलाएको अभियानलाई थप निरन्तरता दिन निर्णय गरेको छ ।
सो बैठकले नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारसँग ‘लोककल्याणकारी विज्ञापन’ रकम वृद्धि गर्न माग गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू नभएसम्म लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम वृद्धि गर्न माग गरेको छ ।
सो बैठकले सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यममा लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउन समेत माग गरेको छ ।
नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस सेन्टर, प्रगतिशील पत्रकार संघ, मिडिया नेपाल, क्रान्तिकारी पत्रकार संघ लगायत आधा दर्जन संगठनहरुको साझा प्यानलले गोविन्द आचार्यलाई अध्यक्षको रुपमा उम्मेदवार बनाएको थियो भने प्रेस चौतारी र प्रेस सोसाइटीको प्यानलबाट तीर्थ कोइराला चुनावी मैदानमा थिए ।
चौतारी प्यानलबाट भने एक दलित, महिला, जनजाति, अल्पसंख्यक र प्रदेश गरी ९ केन्दिय सदस्यमा विजयी भएको थिए भने अन्य पदमा आचार्य प्यानलले जीत हात पारेको थियो ।
आचार्य प्यानलबाट उपाध्यक्षमा विपुल पोख्रेल र दिलिप थापामगर, महासचिवमा रमेश विष्ट, सचिवमा रामप्रसाद दाहाल, लक्ष्मी पुन, उदय जिएम, शीतलप्रसाद महतो, रेमबहादुर विश्वकर्मा र प्रकाश थापा तथा कोषाध्यक्ष राजेश मिश्र निर्वाचित भएका थिए ।
त्यसैगरी सदस्यहरुमा खुला केन्द्रीय सदस्यमा जन्मदेव जैसी, टेकराज शाही, नकुल अर्याल, लक्ष्मण कार्की र हरिहरसिंह राठौर विजयी भएका छन् । महिला केन्द्रीय सदस्यमा जानुका बराल, श्वेता सिह्ना र सृजना अर्याल विजयी भएका छन् ।
दलित केन्द्रीय सदस्यमा गोपाल बराइली र मधु शाही, उपत्यका केन्द्रीय सदस्यमा गोविन्दप्रसाद चौलागाईं र लेखनाथ न्यौपाने, आदिवासी जनजाति केन्द्रीय सदस्यमा टेकराज थामी र राजेश चाम्लिङ राई, मधेशी केन्द्रीय सदस्यमा अवधेशकुमार झा र सुरेशकुमार यादव, केन्द्रीय सदस्य अपांगता माधव चम्लागाई, केन्द्रीय सदस्य अल्पसंख्यकमा छेटु शेर्पा, केन्द्रीय सदस्य प्रतिष्ठानमा टीकाराम प्रधान र यम विरही, केन्द्रीय सदस्य एशोसिएटमा पवन आचार्य र राधेश्याम दाहाल विजयी भएका छन् । लेखा समिति सदस्यमा मीरा राजभण्डारी र भूपेन्द्र आचार्य विजयी भएका छन् ।
त्यस्तै प्रादेश केन्द्रीय सदस्यमा प्रदेश नं १ बाट उद्धव तिम्सिना र सटेन्द्र जवेगु, प्रदेश २ बाट देवकुमार यादव र शैलेन्द्र झा, प्रदेश नं ३ बाट कृष्ण गिरी र द्धारीका काफ्ले, प्रदेश ४ बाट नवीनराज कुइँकेल र रामकृष्ण ज्ञवाली, प्रदेश नं ५बाट पुरुषोत्तम सुवेदी र वसन्त गिरी, प्रदेश नं ६ बाट पूर्णप्रसाद चौलागाईं र कलेन्द्र सेजुवाल र प्रदेश नं ७ बाट मीन बम, उत्तरसिंह विष्ट र श्यामदत्त भट्टले बराबर मत प्राप्त गरेका छन् ।